Bixiyaasha Xirfadleyda Solar PV iyo Warshadaha - Soosaarayaasha Sooshal Xirka Solar PV
Xiriiriyaha Solar Panel MC4 Iyadoo leh DC 1000V TUV shaqada la ansaxiyay ee nidaamka PV si loogu xiro moolka qoraxda iyo sanduuqa isku-darka. Xiriiriyaha MC4 wuxuu la jaan qaadayaa Multic Contact, Amphenol H4 iyo alaab-qeybiyeyaasha kale ee MC4, waxay ku habboonaan kartaa fiilooyinka qorraxda 2.5mm, 4mm iyo 6mm. Faa'iidadu waa xiriir dhakhso leh oo la isku halleyn karo, iska caabbinta UV iyo IP67 biyuhu, waxay bannaanka ka shaqeyn karaan 25 sano.
Xiriir badan 4 Xiriiriyaha Solar Cable 1500V 50A waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro meeraha qoraxda iyo Inverter ee xarunta korantada Solar. Xiriiriyaha MC4 wuxuu la jaan qaadayaa Multic Contact, Amphenol H4and noocyo kale oo MC4 ah, kuna haboon fiilada qoraxda, 2.5mm, 4mm iyo 6mm. Faa'iidada Solar Connector waa mid dhakhso leh oo la isku halleyn karo, iska caabbinta UV iyo biiyaha IP68 ee leh damaanada nolosha 25years.
Xiriyaha Xirfadlaha Qorraxda ee loo yaqaan 'MC4 Solar Panel Connector' ee fiilada qoraxda 10mm2
Xiriyaha Xirfadlaha Qorraxda ee loo yaqaan 'Solar Panel Connector' ee fiilada qoraxda ee 10mm2 waxaa loo isticmaalaa nidaamka Solar-ka si loogu xiro gollaha qoraxda iyo Inverter. Xiriiriyaha MC4 wuxuu la jaan qaada Multic Contact iyo noocyada kale ee MC4, wuxuuna ku habboon yahay fiilada qorraxda, 2.5mm, 4mm, 6mm iyo 10mm. Faa'iidada MC4 waa mid dhakhso leh oo la isku halleyn karo, iska caabbinta UV iyo biyuhu IP68, waxay bannaanka ka shaqeyn karaan 25 sano.
10x38mm Solar Fuse Inline Holder 1000V MC4 Fuse Connectorwork oo kujira nidaamka Solar PV si looga ilaaliyo culeyska hada jira kan qoraxda iyo Inverter. 10x38mm Solar Fuse Connector wuxuu la jaan qaada Multic Contact iyo noocyada kale ee MC4, wuxuuna ku haboon yahay fiilada qoraxda, 2.5mm, 4mm iyo 6mm. Faa'iidadu waa fiyuuska gudaha ayaa la beddeli karaa, si dhakhso leh oo isku xirnaan leh, iska caabin UV iyo biyuhu IP67, waxay bannaanka ka shaqeyn karaan 25 sano.
Xirfadlaha Solar Inverter MC4 M12 PV Panel Plug wuxuu ka shaqeeyaa Saldhigga Solar si uu ugu xiro moolka qoraxda iyo Inverter. Xiriiriyaha MC4 wuxuu la jaan qaada Multic xiriiriye iyo MC4 kale, oo ku habboon fiilada qorraxda, 2.5mm, 4mm iyo 6mm. Faa'iidadu waa dhaqso iyo isku xirnaan la isku halleyn karo, iska caabin UV iyo IP67 biyuhu, waxay ka shaqeyn karaan gudaha korantada, sanduuqa kontaroolada iyo banaanka 25years.
Xiriiriyaha Solar Diode Solar Diode ee Xiriirka Solar
Xiriiriyaha Solar Diode Solar Diode ee Iskuxirka Solar waxaa loo isticmaalaa PV Prevent Reverse DIODE MODULE iyo Solar PV system si looga ilaaliyo qulqulka hada jira ee qoraxda iyo Inverter. MC4 Diode Connector wuxuu la jaan qaada Multic Contact iyo noocyada kale ee MC4, wuxuuna ku habboon yahay fiilada qoraxda, 2.5mm, 4mm iyo 6mm. Faa'iidadu waa xiriir dhakhso leh oo la isku halleyn karo, iska caabbinta UV iyo IP67 biyuhu, waxay bannaanka ka shaqeyn karaan 25 sano.
Xirmooyinka Xayawaannada Daboolka ah ee Daboolka Cudurka Caymiska MC4
Mashiinka Cabbirka Cad ee Daboolida Xaraashka Qalabka Qalabka ee loo yaqaan 'MC4 Connector Dust Proof Cover Sealing Cap' waxaa loo istcmaalaa isku xidhka qoraxda ee MC4 lab iyo dhaddig, si looga ilaaliyo wasakhda iyo biyaha kujira tamarta qoraxda iyo nidaamka qoraxda.